Maxaa Ka Dhacay Halkan? | Xaqiiqonews
Maxaa Ka Dhacay Halkan?
Dilalka qorsheysan ee dumarka loogu geysanaayp gudaha Soomaaliya ayaa sii badanaya, waxaana dhacdadii ugu dambeysay ay ka dhacday degmada Kaxda ee gobolka Benaadir.
XAQIIQO NEWS- WARARKA GUDHAA
Meydka qofka dumarka ah ee lagu arkay Kaxda ayaa ahaa mid uu ka muuqday jirdil iyo gowrac, mana jirta cid aqoonsatay ilaa hadda.
Subaxnimadii Sabtida waxaa baraha bulshada lagu baahiyey sariir, joodari iyo dhar uu ka muuqdo dhiig, kuwaasi oo la soo dhigay xaafadda dharkiinleey oo sidaas uga fogeyn goobta meydkan cusub lagu arkay.
Sidoo kale Aqri: Maxay Arintani Mar Walbo U dhaceysaa?
Dilalka noocan ah ayaa joogto ka noqday magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah, dadka waxa ay arkaan oo kaliya dhacdooyinka laakiin ma jirto cid sababta og.
Dadka qaar ayaa mushkiladda ku tilmaamay “mashruuc” ay maalgelinayaan dad gaar ah, waxa ayna farta eedda ku fiiqayaan hay’daha xaquuqda u dooda kuwaasi oo sida lagu eedeeyey mashaariic ku qaata dilalkan iyo sheekooyinka laga sameeyo.
Marka laga soo tago eedeynta aan caddeymaha laheyn, ma jiraan baaritaan dheeri oo dhincyada ku shaqada leh ay sameeyaan ama ugu yaraan lama fisho natiijo ka soo baxda oo dadka lala wadaago.